I-King James Version (KJV) Imbali yeBhayibhile kunye nenjongo
Okufuneka Ukwazi NgeBhayibhile YesiXhosa
Imbali ye-King James Version (KJV)
NgoJulayi ka-1604, uKumkani uJames I waseNgilani wamisela malunga nama-50 abaphengululi beBhayibhile nabafundi beelwimi bakhe, ukuba benze umsebenzi wokuguqulela iBhayibhile entsha ngesiNgesi. Umsebenzi uthatha iminyaka esixhenxe. Ekugqibeleni, kwanikelwa kuKumkani James I ngo-1611. Kungekudala yaba yiBhayibhile epheleleyo yamaProtestanti akhuluma isiNgesi. Inguqulelo yeBhayibhile yeBhishophu ye-1568.
Isihloko sokuqala se-KJV sasingu "IBHAYIBHILE ELINGCWELE, Equlethe iTestamente Elidala, NEMTSHA ENTSHA: Iguqulelwe ngokutsha kwiilwimi zasekuqaleni: kunye neyokuqala iTranshini ngokuziqhelanisa ngokuziqhelanisa kunye nokuhlaziywa, yiMiyalelo yakhe ekhethekileyo."
Umhla wokuqala orekhodiweyo obizwa ngokuba yi "King James Version" okanye "I-Version Authorized" yayingu-1814 AD
Injongo ye-King James Version
UKumkani uJames wayefuna ukuba i-Authorized Version ithathe indawo yokuguqulela i-Geneva ethandwayo, kodwa kuthathe ixesha lokuba ithintelo layo lisasazeke.
Kwisiqalo sokuqala kohlelo, abaguquleli bathi kwakungeyona injongo yabo ukwenza inguqulelo entsha kodwa ukwenza ukuba umntu olungileyo abe ngcono. Bafuna ukwenza iLizwi likaThixo liyazi ngakumbi kubantu. Ngaphambi kwe-KJV, iiBhayibhile azifumanekanga nakwiicawa. IBhayibhile eprintiwe yayinkulu kwaye ibiza, kwaye abaninzi phakathi kweeklasi zentlalo ephakamileyo babefuna ukuba ulwimi luhlale luyinkimbinkimbi kwaye lufumaneke kuphela kubantu abafundiswe kuluntu.
I-KJV ibhalwe ngokusemgangathweni wayo wokuguqulela nokuphakama kwesitayela. Abaguquleli bazinikele ekuveliseni iBhayibhile yesiNgesi eya kuba yinguqu echanekileyo kwaye ingabi yintsingiselo. Babesazi kakuhle iilwimi zasekuqaleni zeBhayibhile kwaye banesipho esithile ekusebenziseni kwabo.
Ukuchaneka kwe-King James Version
Ngenxa yokwesaba kwabo uThixo neLizwi lakhe, kuphela umgaqo wokuchaneka ngokuthe tye ukwamkelwa. Ukuxabisa ubuhle besityhilelo sikaThixo, baqeqesha iitalente zabo ukuba banikezele ngamazwi aseNgesi okhethwe kakuhle ngexesha labo kunye novuyo, umbongo, udlalwa ngumculo, ilungiselelo lolwimi.
Ukunyamezela Amakhulu Eminyaka
I-Authorized Version, okanye i-King James Version, ibe nguguqulelo oluqhelekileyo lwesiNgesi lwamaProtestanti abathetha isiNgesi kangangeminyaka engamakhulu mane. Kuye kwaba nefuthe elikhulu kwiincwadi zonyaka ezedlulileyo ezingama-300. I-KJV enye yeyona nto iguqulelwe kakhulu yeBhayibhile eqikelelweyo eyi-1 yezigidigidi. Ngaphantsi kwe-200 yokuqala ye-1611 i-King James Bible ikhona namhlanje.
Ngokuba uThixo walithanda kangaka ihlabathi, ukuba wanikela uNyana wakhe ozelwe yedwa, ukuba bonke abakholwayo kuye bangabhubhi, kodwa babe nobomi obungunaphakade. (Yohane 3:16)
I-King James Version yindawo yoluntu e-United States.
Resources King James Bible
Ngubani Oye Walala EBhayibhileni?
Ukufunda i-Quiz ethi 'Yeka Indlela Evezwa Ngayo Ukuba Ngombala' nguZora Neale Hurston
5 Iindlela ezahlukeneyo zokuHlanganisa iiNqanawa
Ubuxoki Qala Kwibhola - Inkcazo Nenkcazo
Enye yeGolane yezona ziBhenkco ezityatyayo: I-Hosel Rocket